30 စာပိုဒ်တိုများ Sheldon Cooper | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Big Bang Theory သီအိုရီကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက Sheldon Cooper ၏အကျင့်စာရိတ္တသည်သင့်ကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းမရှိချေ။ ဤအကျင့်စရိုက်ကို Jim Parsons မှတီးခတ်ပြီးလူမှုရေးအခက်အခဲများရှိသည့်လိမ္မာပါးနပ်သောသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
သူသည်လူမှုရေးအခြေအနေများစွာကိုနားမလည်ပါ၊ သူသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်ကိုနားမလည်သူ၊ သူ၌ဝါသနာများစွာရှိပြီးအလွန်အစီအစဉ်များရှိသည်။ အပြင်အပြောင်းအလဲဘာမှမကြိုက်ဘူး။
စီးရီးများတွင်သူတို့ဇာတ်ကောင်တင်ဆက်ထားပါတယ်ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်, ရာသီမဆိုသူ့ကိုမဖော်ပြကြဘူး, ၎င်းဇာတ်ကောင်သည် Asperger's Syndrome ခံစားနေရသောလူတစ် ဦး အားကစားနေမည်ဟုခန့်မှန်းရသည် အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောင်စဉ်ရောဂါကနေဆင်းသက်လာတဲ့ရောဂါ။
Sheldon Cooper ၏အကောင်းဆုံးစကားစု
နောက်ပြီးသူ့ဇာတ်ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်နားလည်နိုင်ရန်အတွက်စီးရီးမှသူ၏အကောင်းဆုံးစကားစုအချို့ကိုသင်ပြပါမည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်သင့်အားလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ လူ၏စရိုက်လက္ခဏာများ၊ ကွဲပြားမှုများကထူးဆန်းခြင်းမရှိဟုမဆိုလိုပါ။ စကားလုံးများဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဇာတ်ကောင်၏စိတ်နှလုံးထဲရောက်မည်မှာသေချာသည်။
ငါကလေးဘဝတုန်းက hippogriff ရှိဖို့အိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်မိဘများကလင်းယုန်ကြက်ဥနှင့်ခြင်္သေ့သုတ်ကိုမပေးလိုကြပါ။ ဒါပေမဲ့သေချာတာပေါ့၊ ကျွန်တော့်အစ်မကသူလိုချင်တဲ့အချိန်မှာရေကူးသင်ခန်းစာယူခဲ့ရတယ်။
လျှပ်စစ်သိပ္ပံပညာရှင်အချို့၏ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုအခြားတိရိစ္ဆာန်များထဲသို့ဖြည်းညှင်းစွာဖမ်းမိသောဂျယ်လီငါးများထည့်သွင်းလိုက်သည်။ မီးအိမ်ငါး ...
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ပတ်မပြည့်ခင်မှာအမှားနှစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Hubble တယ်လီစကုပ်သည်အနက်ရောင်အပေါက်တစ်ခု၏အလယ်တွင်မီးပွိုင့်မီးပွိုင့်ရှာဖွေနေသည့်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးပါသောလူအနည်းငယ်သာရှိကြောင်း Hubble တယ်လီစကုပ်တွေ့ရှိသကဲ့သို့သင်၌ Penny နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အခွင့်အရေးများစွာရှိသည်။
ဘ ၀ နှင့်မျှဝေရန်အခြားလူသားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ခြင်းသည်အမြဲအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ငါပြောတာကငါကိုယ်တိုင်နဲ့အတူတူပဲ၊ သင်တို့အားလုံးကိုတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အလွန်ပျော်ရွှင်စေချင်ပါတယ်။
အိုးရွှင်လန်း! လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကငါတို့အချင်းချင်းတောင်မသိခဲ့ဘူး။ အခုငါညအချိန်မှာမင်းရဲ့အိမ်မှာရှိနေတယ်။ သင်မြန်မြန်သွားနိုင်မလား?
ငါအရမ်းပျော်ရွှင်မိတယ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာဒီဟာကမြို့တော် D. ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဦး နှောက်ကိုချဲ့ထွင်စေသောဆေးတစ်မျိုးတည်းသာကျွန်ုပ်ဝန်ခံသည် - ၎င်းကိုကျောင်းဟုခေါ်သည်။
Leonard၊ ဒီဟာကိုမှားယွင်းစွာမယူပါနှင့်။ သို့သော်နိုဘယ်ဆုကိုသင်ရသည့်နေ့တွင်ပျံသန်းသောကော်ဇောများအပေါ်ဆွဲမြှောက်သည့်ကိန်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်၏သုတေသနကိုစတင်သောနေ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါကငိုစရာအကြောင်းမရှိပါ။ မင်းကဝမ်းနည်းလို့ငိုတယ် ဥပမာ၊ ငါငိုတာကတခြားသူတွေကမိုက်မဲတဲ့အတွက်ငါ့ကိုဝမ်းနည်းစေတယ်။
ကြည့်ရတာအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် ကတ်ကြေးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဆိုပါစက္ကူကျောက်ကိုဖုံးလွှမ်း။ ဒီကျောက်ကအိမ်မြှောင်ကိုနှိပ်စက်တယ်။ ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင် Spock ။ Spock သည်ကတ်ကြေးများကိုချိုးသည်။ ကတ်ကြေးကပုတ်သင်ညိုကိုခေါင်းဖြတ်တယ်။ ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်သည်စက္ကူကိုစားသည်။ စက္ကူ Spock ငြင်းဆို Spock သည်ကျောက်တုံးအားအငွေ့ပျံစေပြီးအမြဲတမ်းကျောက်ဖြစ်သကဲ့သို့ကတ်ကြေးများကိုနှိပ်စက်တတ်သည်။
အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေး? ရှုပ်ထွေးသောနံပါတ်များဖြစ်သော Mandelbrot အုပ်စုသည်ရှုပ်ထွေးနေသည်။ ဒါကပရမ်းပတာပါပဲ။
ဒီဟာငါ့ site ပါ ပြောင်းလဲနေသောဤကမ္ဘာတွင်ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုလေးဖက်မြင်ကက်ဆက်စီယမ်ကိုသြဒီနိတ်တွင်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြပါကကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသည့်အချိန်သည် (0,0,0,0) ဖြစ်သည်။
မင်းဝမ်းနည်းလို့ငိုတယ် ဥပမာ၊ ငါငိုတာကတခြားသူတွေကမိုက်မဲလို့ငါ့ကိုဝမ်းနည်းစေတယ်။
အိမ်ပြင်တွင်နေခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်ဆိုပါက၊ လူသားတို့သည်အဘယ်ကြောင့်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ။ အိမ်တွင်း၌စုံလင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသနည်း။
ငါဟာသာမန်လူတွေရဲ့တကယ့်ကမ္ဘာမှာရှိနေပြီးသူတို့ရဲ့သာမန်အရောင်မဲ့တဲ့ဘ ၀ တွေကိုနေထိုင်နေတယ်…မင်္ဂလာပါသာမာန်လူတစ်ယောက်!
အင်ဂျင်နီယာ။ စဉ်းစားပြီးအိပ်မက်မက်သောသူတို့၏အမြင်ကိုမြင့်မြတ်သော Semi- ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကမည်သည့်နေရာတွင်လုပ်သည်။ မင်္ဂလာပါ Oompah Loompahs သိပ္ပံ!
ငါထွက်ပြီးမင်းကိုဒေါ်လာ ၅၀ သုံးပေးမယ်ဆိုပါစို့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမင်းသိဖို့လိုတယ်၊ မင်းဘာလိုအပ်လဲဆိုတာငါသိတယ်။ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနိုင်ပါပြီ။ ဒေါ်လာ ၅၀ ကိုမင်းပေးမယ်။ ငါ့မွေးနေ့မှာမင်းကိုဒေါ်လာ ၅၀ ပေးမယ်။ ပြီးတော့ငါတို့ထဲကတစ်ယောက်မှမသေမချင်းကျန်အသက်ကြီးသူတစ်ယောက်နဲ့ဒေါ်လာ ၅၀ ချမ်းသာလာပြီ။
ငါအသာပုတ်ချင်တယ်။ ဟုတ်တယ်၊ လင်းယုန်ဝက်ခြင်္သေ့။ ငါ DNA DNA ပေါင်းစပ်နည်းပညာလေ့လာနေပြီးငါဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်မိဘတွေကလင်းယုန်ကြက်ဥနဲ့ခြင်္သေ့ဆီမပေးချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အစ်မသူမကမေးတဲ့အခါရေကူးသွားတယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာသူ့ကိုသူ့ကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တဲ့အခါမှားတဲ့ခြေထောက်ပေါ်ကနေထွက်ခွာသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါပြောတာမှားတယ်လို့ပြောချင်တယ်။
ဒါကငါ့ရဲ့ Rings Blu-Ray စုဆောင်းခြင်းထဲကတစ်ခုလုံး။ မစ္စတာဝူလိုဗစ်ခ်ျသည်ကျွန်ုပ်ထံမှချေးယူပြီးနံပါတ် (၃) disc ကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးသူသတိမထားမိဘဲပြန်ပို့ခဲ့သည်။ ခင်ဗျားဟာတာဝန်သိတတ်သူတစ်ယောက်လို့မင်းပြောမှာလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ နယူတန်မဟုတ်ဘူး။ ပန်းသီးမရှိရင်တောင်မှဆွဲငင်အားကိုရှာတွေ့လိမ့်မယ်။
နေရာတိုင်းမှာအချစ်ရှိနေပြီ? ၎င်းတို့သည်မှားသည်၊ နိုက်ထရိုဂျင်၊ အောက်စီဂျင်နှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တို့သည်လေထဲတွင်ရှိသည်။
ဆောင်းရာသီတွင်ထိုထိုင်ခုံသည်အပူပေးသောရေတိုင်ကီနှင့်နီးကပ်ပြီးချွေးထွက်ရန်လုံလောက်မှုမရှိ။ နွေရာသီတွင်၎င်းပြတင်းပေါက်များဖွင့်ခြင်းဖြင့်ဖန်တီးသောလျှပ်စီးပတ်လမ်း၏ညာဘက်၌ရှိသကဲ့သို့၎င်းသည်ရုပ်မြင်သံကြားသို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကိုတားဆီးရန်မလွယ်ကူသကဲ့သို့၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်စွာဖြင့်လည်ပင်းကိုဆွဲစေသည်။ ငါဆက်နိုင်ပေမယ့်မင်းငါ့ကိုနားလည်ပြီလို့ငါထင်တယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » 30 Sheldon Cooper ကကိုးကား